တောရိပ်: စိတ်ကူးယဉ်မြင်းပြိုင်ပွဲများ – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
အားဖြင့် အက်မင် | နိုဝင်ဘာ 30, 2021
Wildshade မြင်းများအကြောင်း သင်ကြားဖူးပါသလား။? မင်းရဲ့အိပ်မက်မြင်းကို မွေးမြူလိုက်ပါ။ 40 ရွေးချယ်စရာ သန်း, မြင်းတစ်ကောင်ချင်းစီကို လိုက်ဖက်တဲ့ tack နဲ့ တပ်ဆင်ပါ။, သင်သည် ဒဏ္ဍာရီလာ Wildshade နွားအုပ်နှင့် ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြပါ။. စိတ်ကူးယဉ် မှော်မြင်းပြိုင်ပွဲများကို အနိုင်ယူပါ။, စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောကမ္ဘာ!
ဟိုအရင်တုန်းက, Wildshade ရွာအနီးတွင် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်, မှော်ဆန်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။. ကောင်းကင်ယံမှာ သက်တံရောင်တွေ အပြည့်, Wildshade ၏မြင်းရိုင်းများပြန်လာကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာ! သူတို့ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘယ်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိဘူး။. ဒါပေမယ့် သူတို့သေချာသိခဲ့တာတစ်ခုကတော့ မြင်းတွေက ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။, သတ္တိ, လေးစားထိုက်ပါတယ်။. ရွာသူရွာသားတွေ စုပြီး အပြေးပြိုင်ကြတယ်။, မြင်းတစ်ကောင်စီသည် ၎င်းတို့၏ မြင်းစီးသူကို ရွေးချယ်သည်။. မြင်းစီးသူတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားရသည်ထက် သူတို့သည် မြင်းပေါ်မှ စောစီးစွာ တက်ခဲ့ကြသည်, မအောင်မြင်နိုင်ပါ။.
ပြီးနောက်, ကြေကွဲစရာ: ရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် မီးလောင်ခဲ့သည်။, မီးတောက်များ မရပ်တန့်နိုင်. Wildshade မြင်းတွေ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာဘူး။. ရွာကို ပြန်ဆောက်ပြီး လူတွေ ပြန်လာကြတယ်။, ရှုခင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။, မြင်းများ၏ အရိပ်အယောင်မရှိ၊.
ရွာရှိလူများသည် ထိုလှပသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို အမှတ်ရစေရန် မြင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပကြသည်။, မြင်းတွေပေါ်လာပြီး တောရိုင်းအပြေးပြိုင်ပွဲစတဲ့အခါ အတိတ်က မှော်ဆန်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။.
ယခုလည်းသင်, Wildshade မြင်းများ၏ မှော်ဆန်မှုကိုလည်း ခံစားနိုင်သည်။, Wildshade ဂိမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. တောရိုင်းမြင်းပြိုင်ပွဲများ အများအပြားရှိပြီး လှပသည်။, မင်းကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေတဲ့ မြင်းကောင်းတွေ!
– စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို လေ့လာပါ။
– ရွေးချယ်စရာအသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီတွင် သင်၏စွမ်းရည်များကို တိုးမြှင့်လိုက်ပါ။
– ရွေးချယ်စရာ သန်းပေါင်းများစွာမှ ပြီးပြည့်စုံသောမြင်းကို မွေးမြူပါ။
– မြင်းတစ်ကောင်စီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသည်။
– မြင်းတစ်ကောင်ချင်းစီက ထူးခြားတယ်။
– မင်းရဲ့မြင်းကို စမ်းကြည့်ပါ။
– သူတို့ရဲ့ကုန်းနှီးကိုရွေးပါ။, ဇက်ကြိုး, စောင်, ဆံပင်ပုံစံ, ဆံပင်အရောင်
– ပြိုင်ပွဲအတွက် သင်လိုအပ်သည့် ကိရိယာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
– သင့်ဇာတ်ကောင်ကို နာမည်ပေးလိုက်ပါ။
– မတူညီသော မြင်းစီးသူရှစ်ဦးထဲမှ တစ်ဦးကို ရွေးပါ။
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, စိတ်ကူးယဉ်, Horse, Races, တောရိပ်
← Bubble Breaker-အနိုင်ရရန်ရည်ရွယ်ချက် – လှိုင်သာယာ&Hack Rocket League ဘေးသို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack →
DC Legends: Fight Superheroes – လှိုင်သာယာ&Hack
EA SPORTS™ UFC® Mobile2လှိုင်သာယာ&Hack